Artist News | Artist Khabar | Page 2
Artist News	नायिका शिल्पाको छविसँगको ‘भ्यालेन्टाइन’	फागुन, काठमाडौं । आजको ‘भ्यालेन्टाइन डे' मा नायिका शिल्पा पोख्रेलले निर्माता छविराज ओझासँगको प्रेम दर्शाएकी छिन् । छवि र शिल्पाको प्रेमको बिषयमा लामो समयदेखी चर्चा चलिरहेको छ । यो जोडिले केहि बिवाह गर्छन् भन्ने बिषय चलिरहेको बेला शिल्पाले आज ह्याप्पी भ्यालेन्टाईन डे भनेर छविसँगको तस्बिर पोष्ट गरेकी छिन् ।
यसबाट पनि के पुष्टी हुन्छ भने..	हमालकै अगाडि ब्यंग्य, ‘मेरो अहिले सम्म बिहे भएन, राजेश हमालको बिडो थाम्छु कि’ (भिडियो)	फागुन, काठमाडौं । केहि दिन अघिको कुरा हो । अभिनेता राजेश हमाल नुवाकोटको चारघरेमा रुद्रकाली मन्दिर उद्घाटन गर्न पुगेका थिए । उनी सँगै काठमाडौंबाट अन्य गायक गायिकाहरु पनि त्यस ठाउँमा पुगेका थिए । राजेश बिशेष अतिथिको रुपमा स्टेजमा बसिरहेका थिए त्यसैबेला एक गायिकाको गीत गाउँने पालो आयो तर उनले गीत गाउँनु भन्दा अघि केहि हँसाउने खुराकहरु..	कहाँ छन् काँठ क्षेत्रका चर्चित गायक घमेश दुलाल ? (भिडियो सहित)	माघ, काठमाडौं । एकसमयका काँठ क्षेत्रका निकै चर्चित गायक घमेश दुलालको पछिल्लो समय खासै गीत सुनिदैनन् । उनका नयाँ गीत बजारमा नआएता पनि पुरानै गीत अझै पनि ठाउँ ठाउँमा घन्किने गर्दछन् । ‘नारायणथानमा गेट’, ‘झम्की फुली नाकैमा बुलाकी’, ‘कोठी गालैमा’, ‘फुल्यो भमरा फुल्को डालीमा’ लगायतका चर्चित गीत गाएका घमेश दुलालले नयाँ गीत बजारमा दिन नसकेता..	टेरियालाई गृह जिल्लामा भव्य स्वागत	माघ, काठमाडौं । भारतीय टिभी च्यानलमा ‘झलक दिखला जा’को उपाधि प्राप्त गर्न सफल रुपन्देही रुद्रपुरकी टेरिया फौजामगरलाई मङ्गलबार गृह जिल्लामा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
टेरिया मगर फाउन्डेसनले बुटवलमा गरेको कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अघिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारीलगायतले उनको सम्मान गरेका हुन् ।
बुटवलको..	बलिउड चलचित्रमा विल्सनको गेटअप यस्तो (१० तस्बिर)	माघ, काठमाडौं । नेपाली आर्टिस्ट विल्सन बिक्रम राईले बलिउड चलचित्रमा यतिखेर काम गरीरहेका छन् । केहि समय अघि उनले बलिउडकी नायिका आयषा टाकियासँग काम गर्दैछन् भन्ने खबर बाहिर आएता पनि उनका भुमिकाको गेटअप तस्बिर सार्वजनिक भने भएका थिएनन् । करिब दुईसाता छायांकनमा खर्चेका उनले आफ्नो गेटअप भिडियो पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
विल्सनले चलचित्रको..	रुद्रकाली देवी समुद्घाटनमा राजेश हमाल र तुलसी घिमिरे	माघ, काठमाडौं । पछिल्लो समय फुर्सदिला बनेका अभिनेता राजेश हमाल बिभिन्न स्टेज कार्यक्रम तथा मेला महोत्सवमा देखिन थालेका छन् । चलचित्रको अफर कमै आउन थालेपछि उनको ब्यस्ता पछिल्लो समय देश भित्र तथा बाहिरका कार्यक्रममा छ ।
यस्तै गएको सोमबार अभिनेता हमाल नुवाकोटको चारघरे ५, बाँझोबारीमा रुद्राक्ष युवा क्लबले निर्माण गरेको रुद्रकाली देवी..	प्रिती आलेको ‘बाँमरी’ र ‘बेली डान्स’मा यसरी झुम्मिन्छन् दर्शक (तस्बिर/ भिडियो सहित)	माघ, काठमाडौं । गायिका प्रिती आले पछिल्लो समय स्टेज कार्यक्रमहरुका लागी ब्यस्त गायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् । उनले गायिका थुप्रै गीत मध्ये पछिल्लो समय 'बाँमरी बाँमरी म भोली गईहाल्छु बरे रामरी' बोलको लोक गीत चर्चित छ । साथै उनले गाएको 'अब हेर मेरो बेली डान्स' बोलको गीत पनि पछिल्लो समय युवापुस्ता माझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
यसका साथै गएको माघ १४..	रामकृष्ण ढकालको एउटै गीतलाई ‘हिट्स एफएम म्यूजिक अवार्ड’मा तिनवटा अवार्ड	माघ, काठमाडौंं । चर्चित गायक रामकृष्ण ढकालले ‘हिट्स एफएम म्यूजिक अवार्ड’मा तिनवटा अवार्ड पाउन सफल भएका छन् । उनको ‘म हुरीमा दियो जलेको देख्छु’ बोलको गीतले तिनवटा अवार्ड पाएको हो ।
शनिबार काठमाण्डौमा आयोजना भएको ‘हिट्स एफएम म्यूजिक अवार्ड’मा उनको उक्त गीतले बर्षकै उत्कृष्ट गीत, ‘लिरिक्स अफ द इयर र रेकर्ड अफ द इयर’को अवार्ड पाएको हो..	६ तस्बिरमा हेर्नुस् दिपा श्रीको ४० लाखको रातो कार	माघ, काठमाडौं । आर्टिस्ट दिपा श्री निरौलाले चलचित्र 'छक्का पञ्जा'को सफलतासंगै नयाँ कार किनेकी छिन् । नक्सालमा रहेको होन्डाइको शो रुमबाट उनले रातो रंगको होन्डाईको आइ ट्वान्टी एक्टिभ किनेका हुन् । यस अघि सिल्भर रंगको सेन्ट्रो चढ्दै आएकी थिईन् ।
उनले निर्देशन गरेको चलचित्र छक्का पञ्जाको अपार सफलता पनि उनले यो कार किनेकी छिन् । छक्का..	यमबुद्धको आर्यघाटमा अन्तिमसंस्कार (१० तस्बिर सहित)	माघ, काठमाडौं । र्यापर यमबुद्ध अर्थात अनिल अधिकारीको अन्तिम संस्कार गरिएको छ । उनको शबको आज (शनिबार) पशुपति आर्यघाटमा राती ८ बजे अन्तिमसंस्कार गरीएको हो । माघ १ गते आत्महत्या गरेका अनिलको शबको आज १५ दिन पछि काठमाडौं ल्याएर अन्तिमसंस्कार गरीएको हो ।
लण्डनमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेका अनिलको शब लिएर उनको सपरिवार काठमाडौं आएका थिए ।..	Pages:«1234567...46»